May 7, 2022 - Achawlaymyar
သင်ဟာ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ စိတ်ဒဏ်ရာပေးတဲ့မိဘဖြစ်နေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ (၈) ခု
မိဘတွေရဲ့လွဲမှားတဲ့ အချို့အပြုအမူတွေကြောင့် သားသမီးတွေမှာ အသက်ကြီးတဲ့အထိ စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားသမီးတွေက မိဘတွေနဲ့ စိတ်ချင်း ဝေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်လိုအချက်တွေက ကလေးတွေကို စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်စေလဲ ဆိုတာကို love media ကနေ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ၁။ ကလေးအချင်းချင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အပြုအမူ၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို မိဘတိုင်း သတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတူတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောဆိုတာက သူတို့အတွက် ကြိုးစားလိုစိတ် လျော့ပါးစေတဲ့အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ရစေမှာပါ။ ပြီးတော့ မောင်နှမအချင်းချင်းလည်း မနာလိုတာတွေဖြစ်စေပါတယ်။ ၂။ သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကို ကလေးတွေအပေါ်မှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေခြင်း လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ပြဿနာအခက်အခဲကိုယ်စီ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်လာတိုင်း ကလေးတွေအပေါ်ကို လွှဲချအပြစ်တင်တာက ကလေးတွေအတွက် စိတ်မလုံခြုံမှု ခံစားရစေပါတယ်။ … Read more
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ လူတိုင္းမွာေတာ့ မိဘကိုယ္စီ ရွိၾကမွာပါေနာ္…။ မိဘႏွစ္ပါးထဲမွာမွ သားသမီးအမ်ားစုက မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔ပဲ ပိုရင္းႏွီးၾကတာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္…။ ဖခင္ေတြကေတာ့ မိသားစု စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရွာေဖြေနရတာမလို႔သားသမီးေတြအတြက္ အခ်ိန္မေပးနိုင္တာေၾကာင့္ သိပ္မရင္းႏွီးၾကတာပါ…။ တကယ္ေတာ့ ဖခင္ေတြကလည္း သားသမီးေတြကို ခ်စ္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာ ေျပာျပေပးသြားမွာကေတာ့ သားအတြက္ အျမဲစဥ္းစားေပးတဲ့ မိခင္နဲ႔ မိခင္မသိေအာင္ ေနာက္ကြယ္ကအျမဲဂ႐ုတစိုက္ရွိတဲ့သား သူတို႔သားအမိ ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သန္းႂကြယ္သေဌးႀကီးက သူ႔အေမကိုသြားတုစိုက္ေပးဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးသြားဆရာဝန္စီကိုေခၚသြားပါတယ္။ ဆရာဝန္က အေမႀကီးကိုေသခ်ာစစ္ေဆးေပးၿပီး အေကာင္းဆုံးသြားတုကိုထုတ္ျပပါတယ္။ အေမႀကီးက ေဈးေမးလိုက္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းခါျပၿပီး ေဈးအေပါဆုံးကိုျပခိုင္းပါတယ္။ ဆရာဝန္က သူ႔သားကေဘာစိအႀကီးစားပဲ အေကာင္းဆုံးကိုသာသုံးဖို႔အတြက္ သူ႔သားေဘာစိကိုမ်က္ရိပ္မ်က္ကဲျပလိုက္တယ္…ဒေကာင့္သားက မျမင္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ ဆရာဝန္လည္းမေနနိုင္ေတာ့ လွမ္းေခၚလိုက္တယ္။ဆရာသမားက မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ဖုန္းပြတ္ၿပီးဟိုဖက္ေတာင္လွည့္သြားလိုက္ေသးတယ္။ ဆရာဝန္စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဒီေကာင္ ဘယ္လိုေကာင္လည္းကြ ဒီေလာက္ခ်မ္းသာေနတာကိုေတာင္ သူ႔အေမအတြက္ … Read more
တက္ကသိုလ်တက်စအချိန်၁၆နှစ်အရွယ်မှာဘဲချစ်သူနဲ့လွန်ကျူးမိပြီးကိုယ်ဝန်ရလာသောအခါ ကောင်လေးကတာဝန်မယူဘဲထားခဲ့လို့ ဘဝကိုတစ်ယောက်တည်းကြိုးစားကာကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့သည့် လေးစားဖွယ်ကောင်မလေး လူတိုင်းသည်မိမ၏အခြေအနေအကြောင်းတရားများကိုသေချာစွာချင့်ချိန်သင့်ပေသည်။လူငယ်တို့၏သဘာဝအမှားမကင်းသော်လည်း မှားယွင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်သောသတ္တိရှိရပေမည်။ ယခုတွင်လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Zianne Tremedalဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ တက္ကသိုလ်စတက်စအရွယ်၁၆နှစ်လောက်သာရှိသေးသည့်အချိန်တွင် စိတ်ကစားပြီးရည်းစားထားရာမှလွန်သွားခဲ့ပြီးကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကောင်လေးကတာဝန်မယူဘဲထားရစ်ခဲ့သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိမ်ငယ်စွာနေထိုင်ခဲ့ရသည်။သူမ၏မိဘများကပင်အစကစိတ်ဆိုးပြီးစကားမပြောသည်အထိဖြစ်လာသော်လည်း အရှုံးမပေးဘဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီး ကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ကောင်မလေးဟာသူ၏သားငယ်လေးနှင့်အတူချမ်းမြေ့ဖွယ်ကမ္ဘာလေးကိုရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) Unicode တက္ကသိုလ်တက်စအချိန်၁၆နှစ်အရွယ်မှာဘဲချစ်သူနဲ့လွန်ကျူးမိပြီးကိုယ်ဝန်ရလာသောအခါ ကောင်လေးကတာဝန်မယူဘဲထားခဲ့လို့ ဘဝကိုတစ်ယောက်တည်းကြိုးစားကာကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့သည့် လေးစားဖွယ်ကောင်မလေးလူတိုင်းသည်မိမ၏အခြေအနေအကြောင်းတရားများကိုသေချာစွာချင့်ချိန်သင့်ပေသည်။ လူငယ်တို့၏သဘာဝအမှားမကင်းသော်လည်း မှားယွင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်သောသတ္တိရှိရပေမည်။ယခုတွင်လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Zianne Tremedalဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ တက္ကသိုလ်စတက်စအရွယ်၁၆နှစ်လောက်သာရှိသေးသည့်အချိန်တွင် စိတ်ကစားပြီးရည်းစားထားရာမှလွန်သွားခဲ့ပြီးကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကောင်လေးကတာဝန်မယူဘဲထားရစ်ခဲ့သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိမ်ငယ်စွာနေထိုင်ခဲ့ရသည်။သူမ၏မိဘများကပင်အစကစိတ်ဆိုးပြီးစကားမပြောသည်အထိဖြစ်လာသော်လည်း အရှုံးမပေးဘဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီး ကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ကောင်မလေးဟာသူ၏သားငယ်လေးနှင့်အတူချမ်းမြေ့ဖွယ်ကမ္ဘာလေးကိုရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) လေးစားလျက် လူတိုင်းသည်မိမ၏အခြေအနေအကြောင်းတရားများကိုသေချာစွာချင့်ချိန်သင့်ပေသည်။လူငယ်တို့၏သဘာဝအမှားမကင်းသော်လည်း မှားယွင်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်သောသတ္တိရှိရပေမည်။ ယခုတွင်လည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ Zianne Tremedalဆိုသည့်ကောင်မလေးဟာ တက္ကသိုလ်စတက်စအရွယ်၁၆နှစ်လောက်သာရှိသေးသည့်အချိန်တွင် စိတ်ကစားပြီးရည်းစားထားရာမှလွန်သွားခဲ့ပြီးကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်ကောင်လေးကတာဝန်မယူဘဲထားရစ်ခဲ့သဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သိမ်ငယ်စွာနေထိုင်ခဲ့ရသည်။သူမ၏မိဘများကပင်အစကစိတ်ဆိုးပြီးစကားမပြောသည်အထိဖြစ်လာသော်လည်း အရှုံးမပေးဘဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီး ကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ကောင်မလေးဟာသူ၏သားငယ်လေးနှင့်အတူချမ်းမြေ့ဖွယ်ကမ္ဘာလေးကိုရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) Unicode … Read more
အရွည္၇ေပရွိေသာ မိေက်ာင္းႀကီးတစ္ေကာင္ကို အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ၃၄ႏွစ္အၾကာေမြးျမဴထားခဲ့ေသာ အဖိုးအို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အဖိုးအိုတစ္ဦးသည္ မိေက်ာင္းေပါက္ေလးကို ကုန္တိုက္တစ္ခုမွာ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္အျဖစ္ ေမြးျမဴလာခဲ့ရာ ၃၄ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ မိေက်ာင္းျပပြဲေတြျပဳလုပ္ရင္းနဲ႔ ဝင္ေငြရရွိလာခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းဆိုတာနဲ႔ လူအမ်ားမွ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ၾကေသာ္လည္း အဖိုးအိုရဲ႕ မိသားစုတစ္စုလုံးကေတာ့ မိေက်ာင္းေပါက္ေလးအေပၚ ၾကင္နာစြာ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းေပါက္ေလးသည္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၇ေပထိရွည္ကာ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း သခင္ျဖစ္သူကို အႏၲရာယ္မျပဳသည့္အျပင္ တူတူစား တူတူအိပ္ၿပီး တူတူလမ္းေလွ်ာက္ထြက္ခဲ့ေသးသည္။ Rain (For Ialinks) Unicode အရှည်၇ပေရှိသော မိကျောင်းကြီးတစ်ကောင်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် ၃၄နှစ်အကြာမွေးမြူထားခဲ့သော အဖိုးအို ဂျပန်နိုင်ငံမှ အဖိုးအိုတစ်ဦးသည် မိကျောင်းပေါက်လေးကို ကုန်တိုက်တစ်ခုမှာ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူလာခဲ့ရာ ၃၄နှစ်အကြာမှာတော့ မိကျောင်းပြပွဲတွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့ ဝင်ငွေရရှိလာခဲ့သည်။ မိကျောင်းဆိုတာနဲ့ လူအများမှ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြသော်လည်း … Read more
ငါကျတော့ချီးစားတယ်မင်းကျတော့ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှစမ်းချောင်းတွင်See More…
Zawgyi ငါကျတော့ချီးစားတယ်မင်းကျတော့ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှစမ်းချောင်းတွင်See More… ငါကျတော့ ချီးစားတယ် … မင်းကျတော့ ချီးမစားဘူးဆိုပြီး ချီးပြိုင်စားရာမှ လူသ—တ်မှုဖြစ်တာ … စမ်းချောင်း ဂွဈေး မကြီးကြီးလမ်းထိပ်တွင် စည်ပင်သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း အချင်းချင်း ဓ—ားထိုးမှု့ဖြစ် အမှုဖြစ်ပုံမှာ အရက်သောက်ပြီး စကားများကြောင်း၊ ေ–သဆုံးသူသန်းထိုက်ဦးမှ မင်းက ချီးစားရဲလားဟု၊ တရားခံ ဇော်လင်းထက်အား မေးရာ၊ ဇော်လင်းထက်မှ စားရဲတယ်ဟုပြောပြီး ……. ဈေးအိမ်သာသို့သွားကာ ချီးယူလာပြီး ဝါးစားကာ သန်းထိုက်ဦးအား ကျွေးရာ၊ သန်းထိုက်ဦးမှ မစားသဖြင့် ” မင်း မိန်းမဘဲ ” ဟုပြောပြီး အမှိုက်ပုံထဲသို့ ဓားသွားရှာကာယူလာပြီး…… သန်းထိုက်ဦး၏ လည်ပ–င်းအား (၁)ချ–က်ထို-း၍ သန်းထိုက်ဦး လဲကျ ေ-သဆုံ-းသွားကြောင်း၊ ဇော်လင်းထက်မှ ဝန်ခံပြောဆိုသည်ဟုသိရှိရပါ သည်။ YMH. zin … Read more
တစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက် အစာအိမ်ကျန်းမာရေး ကောင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိမထားမိဘဲ လုပ်မိတဲ့ အချို့အမူအကျင့်တွေကြောင့် အစာအိမ်ကျန်းမာရေးက ယိုယွင်းလာပါတယ်။ အစာအိမ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအချက်တွေကို ထိခိုက်စေသလဲ ဆိုတာကို love media ကနေ ဖော်ပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ အစာမရှိသေးခင် လိမ္မော်ရည်သောက်ခြင်း သင်က မနက်အိပ်ရာထပြီး ဗိုက်ထဲ အစာမရှိသေးခင်မှာ လိမ္မော်ရည်ကို သောက်ဖို့ မရွေးသင့်ပါဘူး။ ဗိုက်ထဲ အစာမရှိသေးခင် citrus acid ပါတဲ့အသီးတွေကို စားတာက အစာအိမ်ထဲမှာ အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို များလာစေတာကြောင့် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်တာကို ခံစားရစေမှာပါ။ ၂။ ပန်းကန်ကို ရေမြှုပ်နဲ့ဆေးခြင်း ပန်းကန်ကို ရေမြှုပ်နဲ့ဆေးတာထက် ဆီလီကွန်ဘရက်ရှ်၊ ပလက်စတစ်ဘရက်ရှ်နဲ့ဆေးဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အကြံပေးကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဘရက်ရှ်တွေက အသုံးမပြုခင်မှာ ခြောက်သွေ့နေလို့ပါ။ ပန်းကန်ဆေးရေမြှုပ်တွေက အချိန်ကြာကြာစိုစွတ်နေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေ … Read more
အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး
အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကအနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi Vision အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကအနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Crd အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကအနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကအနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi Vision အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကအနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Crd Zawgyi Vision အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီးပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။ … Read more
ပထမဆုံး ရည်းစားအဖြစ်ထားဖူးသော မိန်းကလေးနှင့် ဖုန်းပြောနေချိန် ကိုယ်တိုင်ပင် သတိမထားမိပဲseemore
လူငယ္အမ်ားစုသည္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ဖုန္းေျပာေနသည့္အခါမွာ ၾကည္ႏူးလြန္ၿပီးေတာ့ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကိုပင္ ေမ့ေနၿပီး ကိုယ္တိုင္ပင္ သတိမထားမိေတာ့ပဲ အနားတြင္ ရွိေသာ အရာတစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္ေနတတ္ၾကတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Guangdongျပည္နယ္ရွိ ေကာင္ေလးတစ္ဦးသည္ သူ႔ဘဝရဲ႕ ပထမဦးဆုံး ရည္းစားစထားခ်ိန္တြင္ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားလြန္းေနၿပီး ခ်စ္သူမိန္းကေလးရဲ႕ အသံေလးကို မျပတ္ၾကားခ်င္ေနသည့္အတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ဖုန္းပဲ ေျပာေနခဲ့သည္။ ေကာင္ေလးသည္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုမွာဌားေနစဥ္ အျပင္မွာဖုန္းထြက္ေျပာခဲ့ရာ ခ်စ္သူမိန္းကေလးရဲ႕ စကားသံကိုၾကားၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမရေတာ့ပဲ ကိုယ္တိုင္က ဘာလုပ္လို႔ဘာကိုင္ေနရမွန္းမသိနဲ႔ အေဆာက္အဦးအျမင့္ေပၚသို႔ တျဖည္းျဖည္း တက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ေကာင္ေလးသည္ တိုက္ခန္းရဲ႕ ၅ထက္ေျမာက္ေလာက္အေရာက္မွာေတာ့ ေအာက္ကို ငုံ႔ၾကည့္လိုက္မိၿပီး သတိျပန္ဝင္လာကာ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး ျပန္မဆင္းရဲေတာ့ပဲ ျဖစ္ေန၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အကူအညီေတာင္းခဲ့ရသည္။ Rain (For Ialinks) Unicode ပထမဆုံး ရည်းစားအဖြစ်ထားဖူးသော … Read more
ဒါရိုက်တာမောင်သီကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံဆော်တယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီး ဖေအောင်/People’s Spring နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လူမှုကွန်ရက်ကနေ လှုံဆော်ဝါဒဖြန့်တယ်ဆိုကာ ဒါရိုက်တာမောင်သီကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ၊စမ်းချောင်းမှာနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သီကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဝါဒဖြန့်သတင်းစာမှာ ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာမောင်သီအသုံးပြုတဲ့ U thi ဆိုတဲ့ ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်ကနေ လှုံဆော်ဝါဒဖြန့်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့ စစ်ကောင်စီက သတင်းဖြန့်ထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်း ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ လူရွှင်တော်ကောင်းကျော် ၊ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ အမျိုးသား ဦးခန့်နိုင်တို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာမောင်သီကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံဆော်တယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီး ဖေအောင်/People’s Spring နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လူမှုကွန်ရက်ကနေ လှုံဆော်ဝါဒဖြန့်တယ်ဆိုကာ ဒါရိုက်တာမောင်သီကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ၊စမ်းချောင်းမှာနေတဲ့ ဒါရိုက်တာ မောင်သီကို ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း … Read more
အခုလို ခက်ခဲကျပ်တည်းနေတဲ့ ကာလအတွင်း သူမ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုအား ပရိတ် သတ်ကြီးကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ ( ဒါကြောင့် ပျောက်နေတာကိုး..အားကျနေပါပြီနော်)
မဂ်လာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ မရှိသေးတဲ့ ကာလ အတွင်း ကြိုးစား ပ မ်းစား လုပ်ဆောင် လျက်ရှိနေတဲ့ အရာတစ်ခုအား ထုတ်ပြလိုက် တဲ့ မယ်လိုဒီ တစ်ချိန် တစ်ခါ ကအနုပညာ လောကမှာ အောင်မြင် ကျော်ကြား ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ကတော့ မယ်လိုဒီ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ သူ အနု ပညာ လောကမှ မနားခင် အကယ်ဒမီဆု ကိုဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ လူငယ် လူရွယ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု့ တွေ ကိုပါ ရရှိထားတဲ့ သူတစ် ယောက်ပါ။ သူမဟာ အနုပညာ အလုပ် တွေနားပြီး ချိန်မှာလည်း လူမှုကွန် ရက်ကနေ ပုံရိပ်လေးတွေ တင် ပေးလေ့ … Read more